समृद्धीसम्म पुग्न नसकेको नेपाल – www.bethanchokkhabar.com
सोमबार, साउन १२, २०७७ | २०:१५:१४ |
✍️ बिमल दाहाल, बनेपा-२ काभ्रेपलाञ्चोक /
साधारण तरिकाबाट नेपाललाइ नियाल्दा नेपाल एक भौगोलिक बिभिदताले भरिएको भुपरिबेस्ठित मुलुक हो । सास्कृतिक भनुम या भौगोलिक यी दुबै कुराहरुमा नेपाल अगाडि रहेको पाइन्छ । साथै प्राकृतिक स्रोत साधनहरुले ओतप्रोत मेरो नेपालमा केही कमिकमजोरी हरु पनि छन । जुन कुरालाइ आम नेपाली जनताले नकार्न मिल्दैन । स्रोत र साधन त व्यापक रुपमा रहेका छ्न नेपालमा तर कुन कुरामा चुक भैरहेछ जुन स्रोत साधन हरुको सहि तरिकाबाट सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन ।
यस्ता स्रोतहरुको सदुपयोग गर्नको लागि मुख्य रुपमा नेपाललाइ दक्ष जनसक्तिको आबस्यकता पर्दछ । जसमा विभिन्न बिधाहरु रहेका हुन्छ्न । ती बिधाहरु का दक्षहरुले आ आफ्नो क्षेत्रबाट मुल कुराको निस्कर्शसम्म पुग्दछ्न र यस्ता स्रोत र साधनहरु सदुपयोग गरि हाम्रो देस नेपालमै विभिन्न शिर्सकहरुमा रोजगारिको श्रीजना गर्दछन । यसले आम नेपाली जनताहरुलाई धेरै टेवा पुग्दछ । तर बिडम्बना नेपालमा पुर्ण रुपमा दक्ष जनसक्तिको अभाब छ । जसले हामी सङ भएका साधन हरुको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन र हजारौ युवाहरु रोजगारिको सिल्सिलामा आफ्नो मातृभुमी छोडेर बैदेसिक रोगारिको लागि आफ्नो देस छोड्न बाध्य छ्न ।
कृषि प्रधान देस नेपाल जाहाका ८०% मानिसहरु आफ्नो दैनिकी खेती किसानी गरेर चलाउछ्न । तर पनि उत्पादन गरेआनुसारको बजार भाउको कमिले गर्दा कृषकहरु जेनतेन गरि दुखकस्टमै आफ्नो जिन्दगिको गुजारा गरिरहेका छन । औसत रुपमा पुरै नेपाललाई नियाल्नु पर्दा नेपाली जनताको दैनिकी दुखकस्टमै बितिरहेको देखिन्छ । आज नेपाली जनता तथा नेपाली कृषक को आखाले एउटै कुराको खोजी गरिरहेछ । परिबर्तन, क्रान्ती कृषि मा होस, रोजगारी मा होस, ब्यबसायमा होस, शिक्षामा होस या स्वास्थमा । नेपाललाई गहिरिएर बुझ्न खोज्दा यहाँ धरै कमि कम्जोरी हरु देखिन्छ । प्रत्यक बुधा हरुमा कमजोरि छन । शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, स्वच पिउने पानी आदि ।
आखिर किन नेपालमा धैरै कमजोरीहरु मात्र देखिन्छ ? यी सबै कुराहरुमा सहजता किन देखिदैन?यो सबै कमजोरीहरुलाइ निस्कृय पार्न मुख्य भुमिका देसको कुन निकायले खेलेको हुन्छ ? पक्कै पनि नेपाल सरकारले ।
राजतन्त्रको अन्त्य भए देखि आज सम्मको समयलाइ नियाल्दा १९ बर्स को समय हामिसङ थियो र देस लाई आधुनिकिकरण तथा देसको आर्थिक सुधृकरण गर्ने लक्ष्य लियर गण्तन्त्र स्थापना भैसकेको पनि १५ बर्स बितिसक्यो। तर देस र हामी देसका जनता जहाको तेहि छौ । आखिर किन भएन नेपालमा रोजगारिको स्थापना ? किन भएन स्वास्थमा सुढृडिकरण ? किन भएन शिक्षामा आधुनिकिकरण ? र किन भएन कृषक हरु धेरै भएको देसको कृषि मा क्रान्ती आखिर किन ? आजसम्म कसैले सोचेको छ किन हामी यी सबै कुराहरुमा पछाडी छौ आजको युगमा पनि ५ जनाको परिवार पाल्न पनि किन सात समुन्द्र परि जानुपर्छ ? राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न किन पर्देस जानु पर्छ ? कुनै रोग लागेमा राम्रो उपचार को लागि किन अरुको देस जानू पर्छ ? आखिर आम नेपालिहरुले कहिले सम्म परदेसको गुलामी गर्नु पर्ने ? के रेमिटेन्स बिना नेपाल चल्न सक्दैन ? के नेपाली हरु पर्देसमा घोटिन मात्र जन्मिएका हुन । सानो कुरा छ । बुझ्न धेरै गारो पर्दैन । धरै पर्दैन दुई कुरामा धेरै भन्दा धरै सुधार गर नेपाल सर्कार मात्र शिक्षा अनि अबसर अनि सबै कुरा आफै परिवर्तन हुन्छ। शिक्षामा परिवर्तन गर्न नेपाल सरकार ले नया नया आधुनिक प्रयोगशाला भएका बिस्वबिध्यालयको निर्माण गर्नु पर्छ र तेस बिश्वबिध्यालयका अध्यापक हरु दक्ष एबम अनुभबी हुनु पर्छ ।
जब नेपाली शिक्षण प्रणालिले नया आयाम पाउछ तब सबै जनता सिक्षित हुन्छ्न तेस्पछी हाम्रो समाज मा रहेका बिकृती हरु पनि बिस्तारै समाप्त हुँदै जान्छ्न । देसका सबै जनता चेतनशिल हुन्छ्न । आज को युगमा पनि नेपालका कतिपय बिकट क्षेत्रहरुमा चेतना तथा सिक्षाको अभाबको कारणले गर्दा कयौ हिन्सा हरु भैरहेको छ । जब मानिस शिक्षित तथा चेतनसिल हुन्छ्न तब नेपालका कयौ कुरिती तथा अन्धबिस्वास मेटियर जान्छन । र अर्को कुरा शिक्षाले नै रोजगारी र अबसर हरु सृजना गर्दछ । करोडौ नेपाली युवाहरु रोजगारी र अबसरहरु को खोजिमा दिन प्रतिदिन देसबाट बाहिरिने क्रम जारी छ । जस्को कारणले हाम्रो देस नेपालको श्रम तथा बौद्दिक शक्ति बाह्य रास्ट्रले प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । जब सम्म नेपाली स्रोत हरुको प्रयोग नेपालले नै लिन असमर्थ रहन्छ तबसम्म हामी नेपाली हरुले अरुकै गुलामी गरेर आफ्नो जीवन चलाउनु पर्छ ।
यी सबै कुराहरु लाई नियाल्दै जादा अन्त्यमा नेपालको बिकास तथा नेपाली जनताहरु पुर्ण चेतनशिल नहुनुमा एउटा मात्र कमजोरी देखिन्छ त्यो हो राजनैतिक खिचातनी । नेताहरुमा कुर्सिको मोह धेरै हुनु, भ्रस्टाचारमा लिप्त हुनु, देसमा भएका विभिन्न कमिकम्जोरी हरु औल्याउन न सक्नु र अफुले चलायको रजनैतिक ब्यबस्थाको बरेमा पुर्ण ज्ञान नहुनु हो । यी सब कमिकम्जोरीहरु साथमा रहदा रहदै पनि सत्ता र कुर्सीको मोह नछोड्ने राज नेता हरुले जबसम्म नेपालको राज्य सस्था को बागडोर सम्हाल्छन तब सम्म नेपालमा रहेका कयौ कमि कम्जोरी तथा गरिबी को निवारण हुन असम्भब छ ।